Gadget သုံးသပ်ချက်များ - နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် Gadget သတင်းများ (စာမျက်နှာ ၃)
3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ PS5 နားကြပ်များသိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်း [သုံးသပ်ချက်]
ကျွန်ုပ်တို့သည် Pulse 3D အသစ်ဖြစ်သောတရားဝင် PS5 နားကြပ်များကို 3D အသံစွမ်းဆောင်ရည်အားလုံး၏အားသာချက်ကိုရယူပြီးစစ်ဆေးခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Cambridge Audio Melomania Touch အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်လေ့လာမှုကိုပြောပြပါမယ်။
အသံနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Audio-Technica မှ TrueWireless ATH-CK3TW နားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Jashen V16 အသစ်ဖြစ်သောစွယ်စုံရ။ စျေးသက်သာစွာဖြင့်စျေးကွက်တွင်ရောင်းအားများများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်လက်လှမ်းမှီနိုင်သောလက်ကိုင်လေဟာနယ်ကိုကြည့်ပါ။
ကျနော်တို့ Elephone ရဲ့စမတ်နာရီအသစ်ဖြစ်တဲ့ Elephone R8 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ သင်မယုံနိုင်လောက်သောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောကိရိယာတစ်ခု။
ငါတို့နှင့် DualSense အားသွင်းသည့်စခန်းအသစ်နှင့် PlayStation5DualSense controller ကိုရှာဖွေပါ၊
Energy Sistem စတိုင်3သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်နားကြပ်၊ အသံအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းအားကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
iPhone 12 Pro VS Huawei P40 Pro၊ ဘယ်ကင်မရာကအကောင်းဆုံးလဲ။
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းကင်မရာနှစ်ခုဖြစ်သော iPhone 12 Pro နှင့် Huawei P40 Pro တို့အကြားကင်မရာနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
Energy Sistem အိမ် Speaker 8 Lounge ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တွင်းထောင့်တိုင်းကိုတေးသီချင်းဖြင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်စနစ်အိမ်တွင်း Speaker 8 Lounge ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပါဝါနှင့်အသံအရည်အသွေး။
Honor MagicBook 14 သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှအလင်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
အလုပ်နှင့်လေ့လာမှုအတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ အလုပ်လုပ်နိုင်သော Ultrabook အသစ် Honor MagicBook 14 ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ထားသည်။
Google TV၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ စျေးနှုန်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များဖြင့် Chromecast
Google သည် Chromecast ကိုအဝေးထိန်းစနစ်နှင့်ဂူဂဲလ်တီဗီလည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခုထည့်ခြင်းဖြင့်အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Philips 273B9 သည်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဇယားသို့သင့်အားတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည့် USBC ဆက်သွယ်မှုပါသည့် Full HD မော်နီတာအသစ်ဖြစ်သော Philips 273B9 ကိုယူဆောင်လာသည်။
Amazon Fire TV Stick (2020)၊ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်သောဂန္ထဝင်
Amazon သည် Fire TV Stick range ကိုထုတ်ကုန်အသစ်ဖြင့်အသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်သတင်းအချို့ရရှိခဲ့သည်။
LG က 32UL950-W, အလွန်စွယ်စုံ 4K မော်နီတာ [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအရည်အသွေးမြင့် LG 32UL950-W မော်နီတာကိုအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အမေဇုံက Fire TV အကွာအဝေးကိုဆက်ပြီးလောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်တီဗီအသစ်အကြောင်းပြောနေသည်။
Xellence သည်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သော Active Noise Canceling (ANC) TWS နားကြပ်များကို Kygo မှစတင်ခဲ့သည်။
Watch GS Pro, ဂုဏ်အရှိဆုံးအများဆုံး "ပရီမီယံ" နာရီ
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာရှိသောကိရိယာဖြစ်သော Honor ထံမှ Watch GS Pro အသစ်ကိုဆန်းစစ်ပြီး၎င်းသည်ယနေ့အထိဖြန့်ချိလိုက်သည်။
Twins Tip၊ Fresh ,n Rebel မှ TWS နားကြပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Fresh'n Rebel မှ Twins Tip အသစ်ကိုစမ်းသပ်နေပြီးသင်ကြည့်ရှုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးသည်။
UGREEN ထုတ်ကုန်သစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီများသည်ဘယ်တော့မှစွန့်ခွာမည်မဟုတ်ပါ။ သင်စိတ်ပျက်မည်မဟုတ်ပါ
Huawei Watch GT2 Pro သည်ယနေ့အထိအပြည့်စုံဆုံးနာရီဖြစ်သည်။ ဤနက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်အားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
TWS ကြိုးမဲ့နားကြပ်ဖြင့်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါကကျွန်ုပ်တို့ AUKEY EP T25 ကိုနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် AJAX ကိုတင်ပြသည်၊ ၎င်းသည်လစဉ်ကြေးမလိုအပ်ဘဲစျေးကွက်ထဲတွင်အဆင့်မြင့်ဆုံးအိမ်လုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်သည်
Crosscall Trekker-X4၊ လှုပ်ရှားမှုကင်မရာပါ ၀ င်သောဖုန်းတစ်လုံးသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုကောင်းမွန်သောမှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
Dreame V9 သည်လက်ကိုင်ဖုန်စုပ်စက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စွမ်းအားကောင်းပြီးစျေးကွက်ထဲမှငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Xiaomi ၏ Redmi အကွာအဝေးနှင့်အခြားထုတ်လုပ်သူများမှယေဘုယျအားဖြင့်မွမ်းမံမှုများပုံမှန်ရရှိသည်။
Moshi Otto Q + Vortex 2: အမြန်ဆုံးကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်
Moshi's Otto Q သည်ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်ဖြစ်သည်။ သင့်ကိုလည်း Vortex 2, Hi-Fi နားကြပ်အသစ်များကိုပြသသည်။
Aorus 5, Gigabyte ၏မူလအဆင့်ကစားနည်းလက်တော့ပ် [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
Aorus5သစ်သည်ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးနေသော Gigabyte ၏ပရိသတ်အဆင့်အတွက်ကစားနည်းလက်တော့ပ်များနှင့်ငါတို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ။
ASUS ProArt StudioBook 15, တီထွင်သူများအတွက်လိုအပ်သည့်လက်တော့ပ်တစ်ခု
ကြမ်းတမ်းတဲ့ SSD (၅၀၀ GB) အလွန်အစွမ်းထက်သည့်အိတ်ဆောင် hard drive [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
SPC Gravity Octacore, 4G ပါသောစီးပွားရေးတက်ဘလက် [analysis]
SPC မှ Gravity Octacore၊ 4G ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဈေးနှုန်းချိုသာသောပစ္စည်းရှိသည့်တက်ဘလက်၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချရန်ခက်ခဲသည်။
ROG Strix Scar 17 သည်အလွန်အဆင့်မြင့်ဂိမ်းကစားခြင်းလက်ပ်တော့တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုတကြိမ်တွင် Asus ROG Strix Scar 17 (G732LXS) အသစ်ကိုစမ်းသပ်စားပွဲပေါ်၌သင်ပြီးနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုပြသသည်။
Sonos Arc သည်ထူးကဲကောင်းမွန်သော soundbar ပုံစံဖြစ်သည်
Sonos Arc အသစ်ကိုစျေးကွက်တွင်စံနှုန်းသတ်မှတ်ပေးမည့် soundbar အသစ်အားသင်နက်နက်နဲနဲသုံးသပ်ထားပါသည်။
Honor Magic Earbuds: တန်ဖိုးကြီးနားကြပ်များနှင့်စစ်ပွဲကိုကြေငြာပါ (ပြန်လည်သုံးသပ်)
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစားပွဲပေါ်၌အသံကောင်းကောင်းနှင့်ယူရိုတစ်ရာအောက်ရှိသော Honor Magic Earbuds၊ ကြိုးမဲ့နားကြပ်အသစ်များရှိသည်။
Amazon Fire HD 8 2020 အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်လေ့လာပါသည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီးစျေးသက်သာပြီးအသစ်တက်ဘလက်ဖြစ်တဲ့ Amzon Fire 8 HD အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲမှာပိုက်ဆံနည်းနည်းတော့ပေးနိူင်သည်။
Sonos Arc၊ တကယ့်ကိုဇိမ်ကျသော soundbar - Unboxing
Sonos သည်စမတ်ကျပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့် Arc Soundbar ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။ သင်သည် unboxing၊ setup နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုပြသသည်။
Xiaomi Mi True ကြိုးမဲ့နားကြပ် ၂ ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ထားသည်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစားပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Xiaomi Mi True Wireless Earphones2ရှိပြီးသင်ဝယ်ယူမှုကိုစဉ်းစားပါက၎င်းတို့ကိုနက်ရှိုင်းစွာစစ်ဆေးသည်။
ကျနော်တို့ ASUS ZenBook Duo အသစ်နှစ်ခုပါ ၀ င်တဲ့ဖန်သားပြင်နှစ်ခုကိုအနာဂတ်မှာကြည့်နိုင်အောင်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ unboxing နှင့်၎င်း၏ In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထွက်သယ်ဆောင်။
Huawei Y6P: ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei မှနောက်ဆုံးပေါ်“ စျေးနှုန်းချိုသာမှု” ကိုဆန်းစစ်သည်
Huawei Y6P အသစ်၏အသေးစိတ်လေ့လာမှုကို Huawei မှ၎င်း၏ကတ်တလောက်များတွင်ရရှိနိုင်သောစျေးအသက်သာဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုပြုလုပ်မည်။
ဤသည် Xiaomi Mi ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုစကေး ၂ စကေး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
Crosscall Core-X4 - လမ်းဘေးစမတ်ဖုန်း [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
Croscall Core-X4 အသစ်သည် Actualidad Gadget စမ်းသပ်ခန်းတွင်ဖြတ်သန်း။ မရနိုင်သောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ပြည့်စုံသောမိုဘိုင်းကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
SmartMike + သည် Sabinetek ၏ဘလူးတုသ် ၅.၀၊ TWS နည်းပညာနှင့် USB မှတ်ဉာဏ်အရွယ်ရှိသည့်အရည်အသွေးမြင့်မားသော Sabinetek ၏ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းဖြစ်သည်။
Yi 1080p မူလကင်မရာ၊ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာ၊ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှု၊ ထူးခြားသောအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်နှစ်ဖက်မြင်အသံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏နောက်ဆုံးပေါ် P40 Pro နှင့် P30 Pro အဟောင်းများကိုယူပြီးပြောင်းလဲမှုကိုတကယ်ရထိုက်မလားဆိုတာသူတို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည်။
iPad (2019): ယခုဈေးအပေါဆုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်လေ့လာမှုအရ ၁၀.၂ လက်မ iPad (2019)၊ iPad သည်စျေးသက်သာပြီးအရေးကြီးသည့်သတင်းများနှင့်လည်းပိုမိုကြီးမားသည်။
Huawei P40 Pro - Unboxing နှင့်ပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုများ
Huawei ၏ high-end အသစ်ဖြစ်သော P40 Pro ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်၎င်း၏အသစ်အဆန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာများကို unboxing ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy S20 5G အသစ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါမည်
ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူနေပြီး Samsung Galaxy S20 5G နှင့်၎င်း၏သုံးဆသောကင်မရာအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သည်။
စွမ်းအင်စနစ်သည်နှိုးစက်နာရီ၏တိုးတက်မှု၊ နာရီစပီကာ ၃။ LED မီးများ၊ စပီကာနှင့်ဘလူးတုသ်တို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပို၍ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
နေ့စဉ်အသုံးပြုရန် MateBook D15၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း [ANALYSIS]
Huawei ၏စားသုံးသူဌာနခွဲသည်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကိုဆက်လက်ရောင်းချပေးနေသည်။ ဒီထဲမှာ ...
Amazon Echo Show 8 သည်အနိုင်ရသည့်ပုံသေနည်းဖြစ်သော်လည်းပိုမိုကြီးမားသည်။
စျေးကွက်တွင်စတင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်စမ်းသပ်မှုအသစ်ပြုလုပ်သည့် Amazon Echo Show 8 အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲမှာအပ်ထားသည်။
Kygo XENON၊ ဆူညံသံကိုဖျက်သိမ်းခြင်းဖြင့် Premium အသံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး [ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း]
Kygo Xenon မှာ Silver Grey အရောင်ရှိပြီးဒီအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှာပါ ၀ င်တဲ့ကောင်းကျိုးများနှင့်ချို့ယွင်းချက်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပါ။
Cambridge Audio မှ Melomania 1 နားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်၊ အရည်အသွေး၏လက္ခဏာဖြစ်သည်
Cambridge Audio ရဲ့ TWS နားကြပ်ဖြစ်တဲ့ Melomania 1 မော်ဒယ်လ်ကိုကျွန်တော်တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကောင်းမွန်စွာညှိထားသောအသံများကိုပေးသည်။
Ring Indoor Cam သည်သင်၏အိမ်နှင့်ရုံးလုံခြုံရေးအတွက်အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Huawei FreeBuds3အနီရောင်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုဤအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
တက်ဘလက်များသည်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင် ၀ ယ်လိုအားနည်းပါးနေသည်။
Tronsmart Spunky Beat နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ TWS ကြိုးမဲ့နားကြပ်အကြောင်းထပ်မံပြောဆိုသည်။ ဤအခါသမယတွင်လူသိများသည့်ကုမ္ပဏီတခု၏လက်မှသူတို့ရောက်ရှိသည်။
Acer Asipre5(2019) A515-54G လက်တော့ပ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Acer Aspire5(2019) သည်မျှတသောလက်တော့ပ်တစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့်ပရိသတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းတစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Kygo E7 / 1000, TWS နားကြပ်၊ ကိုယ်ပိုင် charging box ပါသောဤကိရိယာ၏စျေးနှုန်းနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်လေ့လာသည်။
စမတ်ဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများတွင်အရည်အသွေးမြင့်တက်လိုသူများအတွက်ဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သော Hohem gimbal ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်ပါပြီ။
ငါတို့နဲ့အတူနေပြီးဒီ 3rd မျိုးဆက်သစ်အမေဇုံပဲ့တင်သံနဲ့ဘာလုပ်နိုင်သလဲဆိုတာရှာဖွေပါ။
Oral-B Genius X 20000N Black Edition ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
သင်၏လက်၌ဤ Oral-B Genius X ကဲ့သို့သွားတိုက်တံရှိပါကသမားရိုးကျသွားတိုက်တံကိုနောက်တဖန်ပြောင်းလဲချင်တော့မည်မဟုတ်ပါ
Smart Speaker Wake Up: Alarm နာရီ၊ Alexa နှင့် Qi အားသွင်းစက်များပါရှိသည်
IKEA မှ KADRILJ မော်ဒယ်တွင်မည်သည့်အရာပါဝင်သည်ကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစမတ်မျက်စိအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသနည်း။
Tone Ultra နှင့် Tone Active + တို့သည် LG ၏ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်သောနားကြပ်များဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလေ့လာပါ။ သင်မောင်းနှင်နိုင်မည့် LG Tone Ultra နားကြပ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွန့်စားမှုအတွက် Tone Active တို့ကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ။
Philips Momentum သည် "အကြီးဆုံး" ဂိမ်းမော်နီတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
သင့်အားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို ၄၃ လက်မအရွယ် 43K HDR မော်နီတာဖြစ်သော Ambilogw ကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်အင်္ဂါရပ်များ Philips Momentum ကိုပြန်လည်တင်ပြပါမည်။
၎င်းသည် Trust မှတင်ပြသော USB Hub ၏ Halyx Aluminium အကွာအဝေးဖြစ်သည်
ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအထူးကျွမ်းကျင်သူ Halyx Alumium အကွာအဝေးကို USB Hub မှစတင်ခဲ့ပြီးသင့် laptop သို့ USBC ၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုချဲ့ထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Roidmi F8 Lite၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည်
စျေးနှုန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်စုံသုံးမှုကြောင့်စျေးကွက်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Roidmi F8 Lite ကြိုးမဲ့ဖုန်စုပ်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - လတ်တလော´N သူပုန်မှနောက်ဆုံးပေါ် Rockbox Bold X၊ Ultimate Ears နှင့်အစားထိုးခြင်း။
Fresh´N Rebel မှ Rockbox X အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိပြီးဤကြိုးမဲ့စပီကာကိုစျေးကွက်သို့အဘယ်အရာရောက်ရှိစေကြောင်းပြောပြရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
အငယ်ဆုံးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံအတွက်ရဲရင့်သောဒီဇိုင်းဖြင့် Arbily G8၊ True Wireless နားကြပ်များကိုလေ့လာခြင်း။
Arbily G9 ကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအသံ၊ ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အထူးလျှော့စျေးပေးထားသောစျေးနှုန်း။
Huawei Nova 5T - အသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကင်မရာစစ်ဆေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei Nova 5T အသစ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီးသင်မြင်တွေ့လိုသောကင်မရာစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူသင်တို့၏ဆန်းစစ်မှုကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်၊
စွမ်းအင်စနစ်ပြင်ပ Box ကိုသားရဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
စွမ်းအင် ၆၀ ဝပ်ပါ ၀ င်သည့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော Energy System Outdoor Box Beast အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
Getaround ကျနော်တို့အများဆုံးပြည့်စုံကား carsharing အပေါ်ရ
ငါတို့ Getaround နှင့်အတူရက်ပေါင်းများစွာသွားလာကြလိမ့်မည်နှင့်ငါကအသုံးပြုခြင်း၏ငါ့ပထမ ဦး ဆုံးလက်အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ပြောပြသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့နှင့်အတူလာပါ။
၎င်းသည် Huawei Nova 5T ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းအား unboxing၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပထမဆုံးသောအထင်အမြင်များကိုယူဆောင်လာပါမည်။
စပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချရန်အတွက်တရားဝင်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်နာရီသစ်ဖြစ်သော Huawei Watch GT2၏ဤအပြည့်အစုံလေ့လာဆန်းစစ်မှုကိုရှာဖွေပါ။
Sonos Move, Sonos စပီကာအသစ်သည်နိုင်ငံခြားသို့သွားသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Sonos အပြင်ဘက်စပီကာအသစ်အားလွတ်လပ်သောဘက်ထရီပါ ၀ င်မှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးယခုတွင်လည်းဘလူးတုသ်နှင့်၎င်း၏နက်ရှိုင်းသောဆန်းစစ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ် Energy System အိမ် Speaker 7
သင်၏အိမ်အတွက်ဂီတကိုသင်ရှာဖွေနေပါက Energy Sistem Home Speaker7သည် Bluetooth, USB နှင့် CD player များအတွက်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုပေးသည်။ အားလုံးတ ဦး တည်းအတွက်!
Sharkoon Skilller SGM3, ပိုက်ဆံအတွက်အဖိုးတန်သောကစားစရာမောက်
Sharkoon's Skiller SGM3, ယခုအခါကြိုးမဲ့ဖြစ်သော Gaming mouse ၏တတိယမျိုးဆက်သည်ဤသုံးသပ်ချက်တွင်သင်သိထားသင့်သမျှကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
HolyHigh HV-368 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
HolyHigh HV-368၊ အသံအရည်အသွေးနှင့်ဘက်ထရီအားသွင်းသည့်နားကြပ်များကိုသင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
Wiko Y80 သည် ၀ င်ရောက်နိုင်သော၊ အသုံး ၀ င ်၍ ကြာရှည်ခံရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်နိင်ငံအဆင့် terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
IKEA နှင့် Sonos တို့၏ပူးပေါင်းမှုမှပေါ်ပေါက်လာသော Table Lamp + WiFi Speaker ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ထိုက်တန်ပါသလော။
SYMFONISK စာအုပ်စင်၊ IKEA - Sonos မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူ IKEA နှင့် Sonos အကြားရှိဤမဟာမိတ်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင် SYMFONISK စင်ပေါ်ယူနစ်နှင့် SYMFONISK ဆီမီးခွက်ရှိသည်။ ဤသည်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Fresh´n Rebel ထုတ်ကုန်၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံနှင့် passive noise ဖျက်ခြင်းနှင့်အတူ Clam နားကြပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
ပြင်ပအားကစားများအတွက်အရည်အသွေးပြည့်နားကြပ်၊ အရည်အသွေးမြင့် HDR အသံနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်နားကြပ်သည်၎င်းတို့ကျဆင်း။ မလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဖြစ်သည်။
LG32QK500-W မော်နီတာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး QHD resolution နှင့်အရွယ်အစား ၃၂ လက်မဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်ပြည့်ဝသည့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စွမ်းအင်စနစ်ဖြစ်သောမည်သည့်သူနှင့်မဆိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော Energy Sistem Outdoor Box Street စပီကာကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
Logitech Craft၊ အလုပ်လုပ်ရမယ့်အကောင်းဆုံးကီးဘုတ်လား။ ငါတို့စစ်ဆေးတယ်
Logitech Craft, selector dial keyboard အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးကီးဘုတ်ဖြစ်ဖို့လိုသမျှအရာအားလုံးပါရှိပါတယ်။
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းသည်အတိတ်ကအောင်မြင်ရန်မလွယ်ကူသည့်စျေးနှုန်းများကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၉၉ အတွက်ဘာမျှမဝယ်ရန်စဉ်း စား၍ မရခဲ့။
Amazon Echo Show5ကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဖန်သားပြင် [VIDEO]
Amazon Echo Show 5, သင့်အိမ်အတွက်အလျင်အမြန် Alexa ၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်လာပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှာဖွေပါလိမ့်မည်။
Scuf Impact၊ ဂိမ်းကစားသူအားလုံးလိုချင်တဲ့ pro Controller
“ gamer” စကြ ၀ moreာသည်ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများပိုမိုများပြားလာပြီးရိုးရာအသုံးပြုသူများသည် ...
ယခုအချိန်တွင်သင်၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မည့်စျေးကွက်ရှိစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးကိရိယာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်စိတ်အားထက်သန်နေသည်။
PAX3သည်အသိဉာဏ်ကောင်းသည့်အငွေ့ပျံစေသောကိရိယာဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးနှင့်ဆက်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့စေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
Asus Zenbook 14 - အမွှေးအကြိုင်ကောင်းသည့်ပုလင်းတစ်လုံးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပြီး Asus Zenbook 14 (UX431FA / FN) ၏အလင်းအိမ်နှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်စားသုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာပါ။
အတွင်းပိုင်း Wifi ကင်မရာ Ezviz CTQ2C ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
သင်၏အိမ် (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်သောလစဉ်ကြေးမလိုဘဲ Ezviz CTQ2C စောင့်ကြည့်ကင်မရာ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုမလွတ်ပါနှင့်။
SPC Visum၊ ဒီစမတ် video intercom ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်
သင်၏အိမ်၏အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအသိဉာဏ်ရှိသောဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုပြုသည့် SPC Visum ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်များစွာရှိသောစမတ်စကေးအသစ် SPC မှ Atenea Fit ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုဆက်လက်ရှာဖွေရန်ရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Oppo ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် Xiaomi နှင့်တိုက်ရိုက်ရပ်တည်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်အာရှအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော Realme3Pro ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားပါမည်။
Reolink C2 Pro သည်သင်၏အိမ်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အသိဉာဏ်ရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကရှိနှင့်ပြီးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားမည်ဖြစ်သည်။ Reolink C2 Pro သည်အလွန်စွယ်စုံသုံးပြီးစျေးပေါသောစောင့်ကြည့်ကင်မရာဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Watch Active သည် Samsung ၏စျေးပေါသောစမတ်နာရီကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
သင်၏လက်ပတ်နာရီပေါ်တွင်စမတ်နာရီကိုထိထိရောက်ရောက်ဝတ်ဆင်ရန် Samsung ၏ Galaxy Watch Active အသစ်ဖြစ်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောလောင်းကြေးကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Energy Sistem မှ Urban Box7စပီကာအားသုံးသပ်ခြင်း
စွမ်းအင် 7W ပါ ၀ င်သော Speaker Energy နှင့်ငယ်ရွယ်။ ရဲရင့်သောဒီဇိုင်းဖြစ်သော Energy Sistem Urban Box 30 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ၆ နာရီအထိမရပ်မနားရပ်နားသည်။
Huawei FreeLace၊ ဤမြင့်မားသောစွယ်စုံနားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
Huawei FreeLace ၏နက်ရှိုင်းသောဆန်းစစ်လေ့လာမှုနှင့်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေစေချင်ပါသည်။
Energy System စပီကာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ၅
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစပီကာ Energy Sistem Smart Speaker5သည် Alexa မှသင်ပေးနိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုလှပပြီးခေတ်မီသောပုံစံဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်
Acer Predator X27 သည်ဂိမ်းကစားသူတိုင်း၏စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်မှုဖြစ်သည်။
သင်နောက်ဆုံးလိုအပ်သည့်နောက်ဆုံးပေါ် Acer Predator X27၊ အဆင့်မြင့် 4K မော်နီတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုမှုများစွာသည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ထိုက်တန်မည်လော။
Acer Travelmate X5 အသစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Acer Travelmate X5 အသစ်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေပြီး၎င်းရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေချင်တယ်။
Conga 3090 ဖုန်စုပ်စက်၊ ငါတို့အတွက်အိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတဲ့လေဆာရောင်ခြည်နဲ့လေဆာရောင်ခြည်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ပရိဘောဂတွေနဲ့မတိုက်မိအောင်လေဆာရောင်ခြည်သုံးသန့်ရှင်းရေးစက်တွေကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။
Amazon Kindle သည်အလင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး Kindle တိုးတက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်သည်။
စျေးကွက်ထဲတွင်ဈေးအပေါဆုံးသောမီးသီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Xiaomi Mi LED Smart Bulb ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ smart မီးသီးတစ်လုံးလိုချင်ပါသလား။ Xiaomi Mi LED Smart Bulb သည်သင်လက်ရှိစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်
၂ နာရီယူရိုမှ Alexa နှင့် Google Assistant ရှိသည့် Motorola Sonic Boost 210 သည်ကြိုးမဲ့စပီကာဖြစ်ပြီး ၄ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဤ Huawei P30 Pro သည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်း၏အံ့မခန်းဖွယ်ကင်မရာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးဖြင့်စွန့်ခွာသွားသည်ဟူသောပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပါ။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ Gamers အတွက် AOC G2590PX မော်နီတာ၊ 144 Hz ပါ ၀ င်သည့် Gam Monitor နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။
Amazon Echo Input, ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာဘာတွေရှိတယ်၊ ဘယ်လို configure လုပ်ရမယ်၊ Alexa ကိုတည်ရှိတဲ့ဒီအလွန်သေးငယ်သောကိရိယာလေးနဲ့သင်လုပ်နိုင်သမျှကိုပြမယ်။
Amazon Echo Show၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - Alexa နှင့်အတူစပီကာကြီးများနှင့်မျက်နှာပြင်ကြီးသည်
Amazon Echo Show ၏ကြီးမားသောအသံနှင့် Alexa တို့ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖော်ပြရန်ကြီးမားသော Amazon မျက်နှာပြင်ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Koogeek S1 စမတ်စကေးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပြီးသင့်အလေးချိန်ကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်
သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိပြီးတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သော Koogeek စမတ်စကေးရှိသည်။
Amazon Echo Spot, ငါတို့က Amazon ရဲ့သေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Amazon Echo Spot, Echo မိသားစု၏သေးငယ်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမည်။
Rhythm Edition system နှင့်အတူ Nanoleaf အလင်းရောင်ပြားများသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲသို့ကျရောက်ပြီးသင်၏နေရာကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်အသေးစိတ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
Logitech K600 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီအတွက်အထူး mouse ကိုအသုံးပြုထားသော mouse နှင့်အထူးသော့များပါသော multi-function ကီးဘုတ်။
Ultimate Ears BOOM3သည်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်စပီကာနှင့်အရည်အသွေးအားလုံးတို့ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေ၍ Ultimate Ears BOOM3ကိုရှာဖွေပြီးအလွန်အစွမ်းထက်သောအသံကိုမြဲမြံစေပြီးအလွန်ခက်ခဲသောစပီကာဖြစ်သည်။
Air Destroyer Game, Jugetrónicaမှမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောဂိမ်း
Air Destroyer Game သည်လျင်မြန်စွာမောင်းနှင်နိုင်သည့်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သောအတားအဆီးများကိုရှောင်ရှားပြီးရန်သူများကိုလှောင်ပြောင်မောင်းနှင်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားသင်မောင်းနှင်သည့်နေရာတွင်၎င်းကိုနက်နက်နဲနဲသိကျွမ်းစေသည်။
Tronsmart Encore Spunky Buds နားကြပ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
TRONSMART Encore Spunky Buds၊ မူရင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူနားကြပ်များကိုစမ်းသပ်ပြီး၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
SPC, Sirius 1050 နှင့် SmartHome ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
SPC Sirius 1050 စမတ်မီးသီးနှင့်၎င်း၏အဖော် Clever Plug ကို Alexa နှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
Spaceball Zerogravity - ပျော်စရာကောင်းသောဘတ်စကတ်ဘောကစားခြင်းသည်၎င်း၏ကြယ်ပွင့်ဒြပ်စင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ယခုထိကြိုးစားခဲ့သမျှနှင့်မတူပါ။
TicPods Free သည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာပါ ၀ င်သော AirPods အတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်
knockoffs များကိုအသုံးပြုရန်မလိုပါ။ TicPods အခမဲ့သည်ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုမိုသောအင်္ဂါရပ်များရှိသည့် Apple AirPods များအတွက်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
LIFX Beam သည်ထူးခြားကောင်းမွန်သောအသိဥာဏ်ရှိသောအလင်းရောင်စနစ်သစ်ဖြစ်သည်။
LIFX Beam သည်အသိဉာဏ်ပြည့်ဝသောအလင်းရောင်ဘားစနစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး RGB LEDs နှင့်မြင့်မားသောသဟဇာတဖြစ်သည်။
Schneider SC300SND သည်သေးငယ်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သော soundbar ဖြစ်သည်။
Schneider SC300SND သည်စွယ်စုံသုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုတွင်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသောအသံဘားတစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy Watch ၏ Android အကဲဖြတ်မှုအဆင့်မြင့်နာရီ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်ကိုင်ဖုန်း Samsung Galaxy Watch၊ Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အမြင့်ဆုံးဆုံးနာရီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုများဖြစ်စေခဲ့သည်။
နောက်တစ်နေ့ Actualidad Gadget တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖူးဖူးဆုံးသောအပျော်တမ်းဆုံးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင့်အားယူဆောင်လာမည်။
Philips E278E8QJAB / 00 မော်နီတာကို ၂၇ လက်မစင်ကြယ်သောစွမ်းရည်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
Philips မှ ၂၇ လက်မကွေးကောက်မော်နီတာ E27E278QJAB / 8 ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ကိုင်ထားသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစွယ်စုံသုံးနိုင်သောမော်နီတာ။
Xiaomi M365 Mijia ဆိုင်ကယ်၏သုံးသပ်ချက်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, ကောင်းကျိုး, ဆိုးကျိုးများနှင့်ဘယ်မှာစျေးနှုန်းချိုသာဝယ်ယူရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ တန်ဖိုးရှိလား
Rowenta Smart Force Essential Aqua သည်ဤစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုစိစစ်နိုင်သည်
Rowenta မှ Smart Force Essential Aqua ကိုဆန်းစစ်ပြီးဒီထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုစတင်ရန်အလွန်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောသန့်ရှင်းရေးစက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်စနစ်ခရီးသွား7နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်စနစ် TRAVEL7ဘလူးတုသ်နားကြပ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအသံ။
Xiaomi Yi 4K + ကင်မရာနှင့်နှလုံးရောဂါ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည် [VIDEO]
Xiaomi Yi 4K + လုပ်ဆောင်ချက်ကင်မရာသည် 4K resolution နှင့် 60 FPS တို့ကိုသယ်ဆောင်လာသည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသည်။
သုံးသပ်ချက် ThiEYE Dr.X RC သည် ၁၀၈၀P နှုန်းဖြင့်ယူရို ၇၀ ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်
ယူရို ၇၀ သာလျှင်လူကိုယ်တိုင်ပျံသန်းမှုနှင့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများ၏အရည်အသွေးကောင်းများကိုကမ်းလှမ်းထားသည့် ThiEYE Dr.X RC ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ Argus Pro မော်ဒယ်ဖြစ်သော Reolink ၏အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်အပြင်ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်းလုံခြုံရေးကင်မရာကိုရှာဖွေပါ။
Power Music Box 7+ စပီကာ potenet အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် raffle
Energy Sistem သည်စပိန်နိုင်ငံမှစက်မှုလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။
သင့်အတွက်ပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် Smart Light Strip နှင့် Smart Outlet၊ Smart LED Strip နှင့် Smart Power Strip တို့ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။
ကျနော်တို့ SPC Heron နားကြပ်, AirPods ၏ပြိုင်ဘက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် SPC Hero နားကြပ်များကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ AirPods နှင့်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာသည်။
iPhone XS Max နှင့် Samsung Galaxy S9 တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရ၊ [ဗွီဒီယို]
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူနေပြီး Samsung Galaxy Note9ဟာဘယ်ဟာက iPhone XS ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်နောက်ဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုရှာဖွေပါ။
Ambi Climate2သည်သင်၏လေအေးပေးစက်ကိုပိုမိုကျန်းမာစေပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လေအေးပေးစက်ကိုစမတ်ကျစေပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာနိုင်စေမည့် Artificial Intelligence ပါသည့်ကိရိယာဖြစ်သော Ambi Climate2ကိုပြသည်။
စွမ်းအင်စနစ်မှစွမ်းအင်မျှော်စင်7True Wireless၊ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းအင်များစွာတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Energy Tower7True Wireless အသစ်ကိုသင့်လက်ထဲအပ်နှံထားပြီးသင်ဝယ်ယူမှုကိုအလေးမထားသည့်အပြည့်စုံဆုံးဆန်းစစ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော Fuseo၊ ဤမီးခွက်ကို Qi wireless charging port ဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Trust Fuseo ဆီမီးခွက်တွင် LED မီးစနစ်ရှိပြီး Qi ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်နှင့် USB အားသွင်းခြင်း၊ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင် နေ၍ ရှာဖွေပါ။
XinleHong44 × 9125 ရေဒီယိုထိန်းချုပ်ထားသောကားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ XinleHong 9125 သည် ၄ ​​× ၄ ရေဒီယိုထိန်းချုပ်မှုရှိသောကားကိုပျော်စရာကောင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူမှုကိုစမ်းသပ်သည်။
Uten Moving Pro သည်အလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်လှုပ်ရှားမှုလက်ကောက်တစ်ခုဖြစ်သည်
Uten Moving Pro အားကစားစမတ်လက်ကောက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ထိပ်တန်းစျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်း။ iOS & Android နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဤနေရာတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံး
Sonos Beam၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကြောင့်ဤမျှလောက်ပြောစရာရှိလဲသိရန်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
Lifx ကုမ္ပဏီမှ A60 နှင့် Mini မီးသီးများကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
Lifx မှလူကြိုက်အများဆုံးမီးသီး ၂ လုံးကိုသင့်အားဆန်းစစ်လေ့လာပြီး၊ အရေးကြီးဆုံးစမတ်အလင်းရောင်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်နှင့်နားကြပ်2Bluetooth ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စွမ်းရည်များအားကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အလွန်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များကိုကတိပေးသောတရုတ်ကုမ္ပဏီမှ iLife A7 ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသော terminal ဖြစ်သည့် Lenovo S5 ကိုဆန်းစစ်သည်
ပြိုင်ဘက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကုန်ကျမည့်တန်ဖိုးနည်းသည့် terminal Lenovo S5 တွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်၌ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Homtom S7 ကိုတန်ဖိုးနည်းစမတ်ဖုန်းများနှင့်ဘောင်အနည်းငယ်သာဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Homtom S7 ကိုကိုင်ထားပြီး၎င်းသည်အကုန်အကျနည်းသောတယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်ရန်ဆန်းစစ်လိုသည်။
Insta360 Nano S ကင်မရာ၊ သင့်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလိုက်ပါနိုင်သော360ºကင်မရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်
သင်၏လက်တွင်သင့် iPhone နှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည့်အဆင်ပြေဆုံးသောစွယ်စုံသုံး360ºကင်မရာ Insta 360 Nano S, ငါတို့နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် iLife V8S စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အပြည့်အ ၀ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
iLife V8S သည်ဉာဏ်ရည်သန့်ရှင်းသောစက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစက်တစ်ခုတည်းတွင်ပွတ်တိုက်ခြင်း၊
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Smartdrone BT၊ အလွန်ကြီးစွာသောအိတ်ဆောင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာရက်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရသာကောင်းစေတဲ့ minidrone တစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
SPC ၏ Alien Stick ကို ကျေးဇူးတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီကိုစမတ်တီဗီအဖြစ်ယူရို ၅၀ ကျော်ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Google Home Mini၊ စပိန်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဈေးအသက်သာဆုံး virtual assistant ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Home Mini ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကြီးမားသောစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟုသင်ပြောပြ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုချန်ထားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Full HD မျက်နှာပြင်နှင့် Xtreme Sound ပါ ၀ င်သည့် Energy Sistem အဖွဲ့မှနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော Energy Tablet Pro4ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပါမည်။
Xiaomi Redmi Note5သည်စျေးကွက်ကိုချိုးဖျက်ရန်ရည်ရွယ်သော terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
Xiaomi Redmi Note5တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိပြီးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကင်မရာစစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုဆန်းစစ်လေ့လာပါမည်။
Smart Force Essential ဖြစ်တဲ့ Rowenta ရဲ့စက်ရုပ်လေဟာနယ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Rowenta သည်စံပြမိတ်ဖက်ဖြစ်သည့် Smart Force Essential ကိုအခြေခံစက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်အားကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးလောကတွင်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင် dFlow Soul၊ စပိန်စကားပြောသူနေရန်လာခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထဲတွင်ကောင်းမွန်သောအသံနှင့်ပထမတန်းစားအင်္ဂါရပ်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပေးစွမ်းနိုင်သည့်360ºစပီကာ dFlow Soul ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါ။
Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi ၏သားရဲ၏မြင့်မားသောအကွာအဝေးတွင်စိုးစံရန်ကြိုးစားရန်သားရဲ၏သုံးသပ်ချက်
ယခုနှစ် ၂၀၁၈ ၏ High Killer Range ဖြစ်သည့် Xiaomi Mi Mix 2018S၊ ပထမတန်းစားပစ္စည်းများနှင့်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်များပါရှိသောဖုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသည်။
Xtorm Freedom သည်အလွန်အရည်အချင်းရှိသော Qi စံအမြန်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ဖြစ်သည်
Xtorm သည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာများအတွက်ဝါရင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွင် Xtorm Freedom ဟုခေါ်သော၎င်းတို့အနက်လူကြိုက်အများဆုံးအားသွင်းစက်တစ်ခုရှိသည်။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုအတွက်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားများထဲမှတစ်ခုကို Acer Swift5ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
ပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော်လည်းစွမ်းအားကောင်းသောမော်ဒယ် Acer Swift5။ ဒါကိုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်လေ့လာကြည့်ရအောင်၊ သင့်ကိုယူရိုတစ်ထောင်အောက်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့လက်တော့ပ်ကိုတင်ပြတယ်။
Thrustmaster Y-300CPX Far Cry5Edition မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဂိမ်းကစားခြင်းနားကြပ်များကို Saga နှစ်သက်သူများအတွက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Thrustmaster Y-300CPX Far Cruz Edition ဂိမ်းနားကြပ်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အသံကောင်းမွန်သောစိတ်ကြိုက်နားကြပ်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေပြီးယင်း၏နက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင့်တော်သည်ဟုယူဆပြီးလက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုဖြစ်သော iPhone X ဖြစ်သော Galaxy S9 + နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Wiko View2၏ထူးခြားချက်ဤထူးခြားသောအလယ်အလတ်အကွာအဝေးကိုသုံးသပ်ခြင်း
View 2, ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအားလုံးမျက်နှာပြင်မော်ဒယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပြီးဗီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်သောစျေးနှုန်း၊ အင်္ဂါရပ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေပါ။ စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei P20 ကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာ၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
Huawei P20 သည်အဆင့်မြင့် terminal များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုပေးစွမ်းပြီးစျေးနှုန်းကိုယူရို ၆၀၀ အောက်တွင်သာကန့်သတ်ထားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ငါတို့နေအိမ်အတွက် switch တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Koogek Smart Dimmer အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်နဲ့အတူငါတို့လိုချင်တာကိုစာသားလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
VR Drone Autoflight၊ ထောင့်ကျယ် HD ကင်မရာ၊ FPV မျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားပြီး ၁၅ မိနစ်ကြာပျံသန်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီကိုယူရို ၁၉၉ ဖြင့်စတင်လိုက်ပါ။ ၎င်းတွင်အလိုအလျောက်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်ချွတ်ခြင်းခလုတ်၊ အကြွင်းမဲ့ထိန်းချုပ်မှု၊ ၂ လေယာဉ်အမြန်နှုန်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစနစ်များပါရှိသည်။ ဒီနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတူပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်မှုရှိသည်။
HyperX Pulsefire Surge သည်ဤမီလီမီတာတိကျသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်
Pulsefire Surge ၏ HyperX ထုတ်ကုန်တိကျသောဂိမ်းကစားခြင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည်။
Energy Tower 8 G2 Wood၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်စနစ်၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအသံမျှော်စင်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
စွမ်းအင်မျှော်စင် 8 G2 Wood ၏အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းတို့အကြားအကောင်းဆုံးမျှတမှုကိုပေးသောအသံမျှော်စင်တစ်ခု၏ဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲတွင်ရှိသည်။
သင်၏ပါတီများကိုစုစည်းရန်စွမ်းအင်ပါတီ ၆ ဖြစ်သောစွမ်းအင်စနစ်အစားထိုးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
အားအင်ပြည့်ဝပြီးရန်လိုသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ LED မီးများလက်တဆုပ်စာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်ပါတီ ၆ အားအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်သွားမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေပြီးဤအသံမျှော်စင်ကိုမည်သည့်အရာဖြစ်စေသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဒီလိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမတွေ့ခဲ့ရဘူး။
Sonos Play:5သည်စျေးကွက်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစပီကာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Dodocool DA158 သည် Bluetooth နှင့် headband အမျိုးအစားနားကြပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းတို့ခံရသည်။
Western Digital SSD၊ Model WD Green 240 GB ရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြတ်အများဆုံး SSD မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သော 240 GB WD Green SSD ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ နေ၍ ၎င်းသည်အရောင်းရဆုံး hard drive များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပါ။
HomePod သည်အသံအရည်အသွေးအတွက်ထူးခြားသောအမှတ်အသားများကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သော်လည်း Apple က၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ တကယ်လေးနက်ပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်။
Logitech Harmony 950 သည်သင်၏ကိရိယာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အဝေးထိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Logitech Harmony 950 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အတွင်းရှိမရေမတွက်နိုင်သောအီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးလေအေးပေးစက်မှ Movistar + ဒီကုဒ်ဒါအထိယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ယင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။